Makore makumi matatu mushure mekunge Tim Berners-Lee aburitsa yekutanga webhusaiti | Linux Vakapindwa muropa
Makore makumi matatu mushure mekunge Tim Berners-Lee aburitsa yekutanga webhusaiti
Musi waAugust 6, 1991 (Makore 30 apfuura) Nyanzvi yeBritish Tim Berners-Lee akaburitsa yekutanga webhusaiti, chiitiko chakachinja zvakanyanya nzira yekutaurirana neruzivo zvakagovaniswa uye kune izvo isu zvine chikwereti chekuti uripano pablog.
Mukuwedzera kune e-mail, musangano wevhidhiyo, uye peer-to-peer faira kugovana, iyo Webhu ndeimwe yeakanyanya kukosha ekushandisa paInternet. Iyo ingangodaro ine simba kwazvo kusvika padanho rekuti izwi reInternet rinowanzo shandiswa kureva webhu.
Tim Berners-Lee akagadzira iyo Nyika Wese Webhu (WWW) mu1989 ndichishanda kuCERN. Iyo Webhu yakatanga kugadzirwa uye kuvandudzwa kusangana nezvinodiwa zve automated ruzivo rwekuchinjana pakati pemasayendisiti kumayunivhesiti nemasangano kutenderera pasirese.
CERN haisi rabhoritari yakasarudzika, asi nzvimbo yekutarisisa nharaunda yakakura inosanganisira vanopfuura masayendisiti zviuru gumi nezvinomwe kubva munyika dzinopfuura zana. Kunyangwe ivo vachiwanzoshandisa nguva kunzvimbo yeCERN, masayendisiti anowanzo shanda mumayunivhesiti uye mumarabhoritari emunyika munyika dzekumba kwavo.
Pfungwa yekutanga kubva kuWWW yaive yekubatanidza shanduko matekinoroji emakomputa, dhata network uye hypertext mune yakasimba uye nyore kushandisa ruzivo rwepasirese system.
Tim Berners-Lee Akanyora zano rekutanga reWorld Wide Web muna Kurume 1989 uye chikumbiro chake chechipiri muna Chivabvu 1990. Mukubatana naBelgian system mainjiniya Robert Cailliau, ichi chikumbiro chakaitwa muna Mbudzi 1990. Akatsanangura pfungwa huru uye akatsanangura mazwi akakosha kuseri kweWebhu.
Gwaro rakatsanangura "hypertext projekiti" inonzi "WorldWideWeb" umo "mabhurawuza" aigona kuona "webhu" ye "zvinyorwa zvehypertext."
Mukupera kwema1990, Tim Berners-Lee akaratidzira mazano ake neyekutanga inoshanda webhurawuza uye server kuCERN, info.cern.ch yaive kero yewebhusaiti yekutanga yepasirese uye webhu server, inomhanya pane Inoteedzana komputa kuCERN.
Yekutanga peji rewebhu kero yaive "Http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject", peji ino yanga iine zvinongedzo kune ruzivo nezve iyo WWW chirongwa pachayo, kusanganisira tsananguro yeiyo hypertext, ruzivo rwehunyanzvi hwekugadzira dura rewebhu, uye zvinongedzo kune mamwe mawebhu sevha sezvavanowanikwa. Iri peji rekutanga rakaburitswa muna Nyamavhuvhu 6, 1991, saka zuva iri dzimwe nguva rinovhiringidzika neruzhinji kuwanikwa kwemaseva ekutanga ewebhu, kunyangwe izvi zvakange zvaitika mwedzi yapfuura.
Pamazuva akakosha echiitiko ichi anotevera:
Nyamavhuvhu 1991: Tim Berners-Lee inozivisa kuwanikwa kweWWW paInternet mumapoka enhau eInternet uye kufarira kwake muchirongwa kunoenderera kupfuura nzanga yefizikisi. Chiziviso chekutanga chakaitwa muna Nyamavhuvhu 6, 1991 pa alt. Hypertext, boka rehurukuro yevanofarira hypertext.
Zvita 1991: iyo yekutanga webhu server kunze kweEurope kuStanford Linear Accelerator Center (SLAC) muCalifornia uye uko kupihwa mukana kwakapihwa SPIERS, dhatabhesi rine ruzivo kune vesaenzi vanoshanda paHEP (High Energy Fizikisi), kusanganisira kugona kutsvaga zvinyorwa.
Ndira 1992: la CERN WWW yakabva pakuva prototype yekutanga ikava basa rinobatsira uye rakavimbika. Kutenda kuCERN Informatics Bulletin, zviuru zvevasayendisiti vakadzidza kushandisa webhu kuwana hupfumi hwemashoko anobatsira, senge nhamba dzenhare, kero dzeemail, mapoka enhau, pamwe necomputer software uye zvinyorwa.
Ndira 1993: iyo National Center yeSupercomputing Zvishandiso (NCSA) kubva kuYunivhesiti yeIllinois yakapa yekutarisa shanduro dzayo browser yaMosesi yeiyo X Window Sisitimu.
Kubvumbi 1993: el CERN yakaburitsa chirevo ichiisa iyo Webhu munzvimbo yeruzhinji, ichivimbisa kuti yaizoita seyakavhurika muyero. Ichi chiziviso chakave nemhedzisiro yekupararira kwewebhu. Zvimwe zviito zvekupa marezinesi zvakatorwa kubvumira webhu kushanduka uye kubudirira. Pakupera kwa1993, pakanga paine mazana mashanu emaseva anozivikanwa ewebhu uye iyo WWW yaiita 500% yeinternet traffic.
Chivabvu 1994: Robert Cailliau akarongeka lYekutanga Musangano Wepasi Pose wePasi rose Webhu kuCERN. Yakaunza pamwechete vashandisi ve380 nevasimudzi uye yakarumbidzwa se "Woodstock yeWebhu."
Gumiguru 1994: Tim Berners-Lee akatanga iyo World Wide Web Consortium (W3C), mukombuta lab yeMassachusetts Institute of Technology (MIT), pamwe chete neCERN uye nerutsigiro rweDARPA neEuropean Commission. Sir Berners-Lee akabatana neMIT, kubva kwaanoramba ari Director weWorld Wide Web Consortium (W3C).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Makore makumi matatu mushure mekunge Tim Berners-Lee aburitsa yekutanga webhusaiti